Habka diyaarada: waxa ay tahay, waxa ay tahay iyo sida loo kiciyo oo loo damiyo - VidaBytes | LifeBytes
Qaabka diyaarada: waxa ay tahay, waxa loogu talagalay iyo sida loo kiciyo oo loo damiyo
Encarni Arcoya | 30/05/2022 08:27 | La cusbooneysiiyay 31/05/2022 08:34 | Dayactirka
Sida caadiga ah, waxaan xasuustaa qaabka diyaaradda marka aan qaadano diyaarad sababtoo ah waxaan ognahay in, inta lagu jiro duulimaadka, waa in aan ka jarno mobile-ka ama dhigno, sida ay noogu sheegaan nidaamka ciwaanka dadweynaha, "qaabka diyaaradda".
Laakiin waa maxay dhab ahaan? maxaa loogu talagalay? Sideed u gashataa oo aad u qaadaa? Ma jiraan xeelado la isticmaalo? Haddii aad sidoo kale isweydiiso, waan ka jawaabi doonaa dhammaan.
1 Waa maxay qaabka diyaaradeed
2 Waa maxay qaabka diyaarada loo isticmaalo?
2.1 si aad si fiican u seexato
2.2 Keydso batteriga
2.3 Ku qor WhatsApp adigoon la arkin
2.4 Dib u bilow isku xirka
3 Sida loo damiyo qaabka diyaarada
3.1 Daar oo dami Android
3.2 Daar oo dami iPhone
3.3 Daar oo dami kombiyuutarka
Waa maxay qaabka diyaaradeed
Habka diyaaraduhu dhab ahaantii waa goob aad ku haysato mobaylkaaga, inkasta oo uu sidoo kale ku jiro tablet-yada, laptop-yada, kombayutarada... Ujeedada tani waa in la gooyo isku xirka wireless-ka, ha ahaato WiFi, xogta telefoonka, wac ama fariinta fariinta ama xataa Bluetooth.
Tani waxay ka dhigan tahay in taleefoonku gebi ahaanba aan la isticmaali karin, maadaama aadan awoodin inaad wacdo ama aad hesho wicitaanno, ama SMS-ka iyo codsiyada ma shaqeyn doonaan. Kaliya kuwa aan isticmaalin internetka ayaa shaqeyn kara, laakiin inta soo hartay waa la hakin doonaa ilaa habkan la damiyo.
Sababta loogu yeero habkan ayaa ah iyadoo lagu tilmaamay mamnuucid jirtay sanado ka hor oo ah in marka diyaarad lagu safrayo aadan isticmaali karin mobilada iyo kuwa wax soo saara, iyadoo ujeedadu tahay inaadan damin mobilka, ay naqshadeeyeen habkan.
In kasta oo maanta la og yahay in aanay waxba ka dhicin in aan la hawlgelin duulimaadyada, waxay sii wadaan inay ku taliyaan, iyo xitaa waajib. Si kastaba ha noqotee, tan iyo 2014 waa la duulin karaa iyada oo aan la kicin (waxaa oggol EASA ama Guddiga Yurub). Maskaxda ku hay in, inkastoo ay suurtogal tahay, ay tahay shirkadaha duulimaadka ee leh ereyga ugu dambeeya ee waxa la samayn karo iyo waxa aan la samayn karin duulimaadyada.
Waa maxay qaabka diyaarada loo isticmaalo?
Hubaal inaad isticmaashay hab diyaaradeed wakhti, oo aanad si sax ah u duulin. Waana taas, in kasta oo isticmaalkeeda ugu weyni uu kan yahay, haddana dhab ahaantii waxay leedahay adeegsi badan maalin kasta. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa kuwan soo socda:
si aad si fiican u seexato
Anigoo niyadda ku hayna in aan si sii kordheysa ugu xirannahay aaladaha (mobile, tablet, computer), jidhkeenu waxa uu ka falceliyaa dhawaaq kasta oo iyaga ka yimaada, ilaa uu ka soo tooso saqdhexe si uu u ogaado waxa soo gaaray.
Taasina waxay dhibaysaa hurdadeena.
Waayo, Isticmaalka qaabka diyaaraduhu waa hab lagu hakiyo mobilka adigoon damin waxayna kuu ogolaaneysaa inaad hesho dhowr saacadood oo degenaansho ah iyo nasasho uu jirkaagu kuugu mahadcelin doono.
Isticmaalka kale ee caadiga ah ee qaabka diyaaradda waa in la badbaadiyo batteriga. Lahaanshaha internet, bluetooth, iyo xiriiro kale oo badan oo si joogto ah u furan ayaa la og yahay inay baabi'iso baytariyada. Haddii aad wax yar ka hartay, Dhaqdhaqaaqiisa waxay kaa caawin kartaa inaad ilaaliso, inkasta oo ay leedahay dhibaato taas oo ah inaad ka tagi lahayd telefoonka iyada oo aan suurtagal ahayn isgaarsiin..
Wax yar oo xagjir ah ayaa noqon lahaa in meesha laga saaro xogta iyo WiFi-ga si uusan ugu xirmin.
Ku qor WhatsApp adigoon la arkin
Tani waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo, iyo Waxay ka kooban tahay daarida qaabka diyaaradda si aad u awooddo inaad aragto gobolada ama uga jawaabto fariimaha iyada oo aan "sneak" soo muuqan 'Qoritaanka' markaan ka jawaabayno.
Taasi waxay la macno tahay in aad qaadan karto wakhtigaaga ka jawaabista, ama aad wakhti ka qaadan karto appka adoon helin fariimo.
Dib u bilow isku xirka
Waa adeegsi yar oo la yaqaan, laakiin aad waxtar u leh marka isku xirka taleefankaaga uu keeno dhibaatooyin (ma lihid wax calaamad ah, wuu gooyaa, si fiican uma maqli kartid, iwm.). Haddii ay taasi dhacdo, kudaminta iyo daminta habka diyaarada shan daqiiqo gudahood ayaa kaa caawin karta dib u dajinta oo dib u bilow isku xirka.
Xaalado badan, tani waxay caawisaa in la hagaajiyo dhibaatooyinka.
Sida loo damiyo qaabka diyaarada
Hadda oo aad wax badan ka ogaatay qaabka diyaarada, waxa la gaadhay wakhtigii aad ogaan lahayd sida loo kiciyo oo loo demiyo moobilkaga, ha noqoto Android ama iPhone.
Xaqiiqdu waxay tahay in ay aad u fududahay maadaama ay inta badan ku jirto kontaroolada degdega ah ee taleefanka. Laakiin haddii aanad waligaa u baahnayn oo aanad garanayn meel ay ku taal, waanu kuu fududaynaynaa.
Daar oo dami Android
Waxaan ku bilaabeynaa taleefannada Android. Xaqiiqdu waxay tahay in ay jiraan dhowr siyaabood oo lagu hawlgelin karo (sidaas darteed si aad u demiso) markaa waxaad haysataa doorashooyin:
Isticmaalka badhanka off. Waxa jira telefoono marka aad riixdo oo aad qabato badhanka awoodda, ku siinaysa menu yar ka hor inta aanad gebi ahaanba damin, mid ka mid ah badhamada waa kan diyaaradda. Taasi waa habka diyaaradeed oo gujis ayaad ku kicin kartaa (oo aad dami kartaa si la mid ah).
In goobaha Android. Haddii aad geliso badhanka dejinta ee taleefankaaga, waxaa laga yaabaa inaad haysato makiinad wax raadis ah, si aad u raadiso haddii aanu soo bixin. Laakiin sida caadiga ah waxay u muuqan doontaa: xagga sare ee menu ama WiFi iyo shabakadaha mobilada. Kaliya waa inaad kicisaa waana taas.
gudaha bar wargelinta. Haddii aad hoos u dhigto baarka ogeysiiska (fartaada waxaad ka soo qaadaa xagga sare ilaa hoose) oo halkaas, kontaroolada deg-degga ah, waxaad yeelan doontaa badhanka astaanta diyaaradda si aad u dhaqaajiso (ama demiso).
Daar oo dami iPhone
Haddii ay dhacdo in mobilkaagu uu yahay iPhone, waa inaad ogaataa inaad had iyo jeer ka heli doonto la mid ah kan Android-ka, taasi waa:
Ku dhex jira liiska dejinta ee taleefankaaga, ama bilawga ama fiirinta WiFi iyo isku xirka.
In xarunta gacanta ee aad iPhone.
Daar oo dami kombiyuutarka
Ka hor inta aynaan ka hadlin in ay jiraan laptops iyo kombiyuutaro badan oo leh badhanka qaabka diyaaradda. Marka laga hadlayo kombuyuutarka taawarka, isticmaalku aad buu naadir ugu yahay, laga yaabee in dib loo dejiyo isku-xiryada aad leedahay, laakiin laptop-yada waxaa loo isticmaali karaa in ka badan, gaar ahaan haddii aad safarto oo aad la shaqeyso muddada safarka.
Shaqaysiinta iyo deminta waxay ku xirnaan doontaa haddii aad isticmaasho Windows, Linux ama Mac Kumbuyuutarkaaga, laakiin ku dhawaad ​​dhammaantood waxaad si fudud uga heli doontaa adiga oo ka dhex raadiya mashiinka raadinta ee menu-ka ugu weyn ama adigoo helaya astaanta diyaaradda (oo la mid ah kan mobilkaaga).
Dabcan, xasuuso inaad damiso ka dib, haddii kale, si kasta oo aad isku daydo inaad ku xidho shabakad dambe, ma oggolaan doonto.
Sida aad arki karto, qaabka diyaaradeed, inkasta oo markii hore loogu talagalay diyaaradaha, maanta waxay leedahay faa'iidooyin badan. Kaliya waa inaad fursad siisaa oo isku daydaa. Wax yar ma dhacayaan mobilka la'aantiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Dayactirka » Qaabka diyaarada: waxa ay tahay, waxa loogu talagalay iyo sida loo kiciyo oo loo damiyo
Sida loo ogaado in kombayutarkaygu yahay 32 ama 64 bits
Disney plus ma leedahay Harry Potter?